आज भ्यालेनटाइन डे ! - Bulbul Samachar
आज भ्यालेनटाइन डे !
bulbul सोमवार, फाल्गुन २ गते 76 views
आज फेब्रुअरी १४ प्रणय दिवस वा प्रेम दिवस । अंग्रेजी मा भ्यालेनटाइन डे । १४ फेब्रुअरीमा विश्वभर मनाइने दिवस हो ।आधुनिक समाजका हरेक युवायुवतीको रोजाईमा पर्न सफल यो पर्व पादरी सेन्ट भ्यालेन्टाइनको वलिदानसँग सम्बन्धित रहेको छ ।
कमल थापाको पार्टीको चुनाव चिन्ह साँढे !